FAQs - Xiamen Kinghow Kunze Chigadzirwa Chigadzirwa Co., Ltd.
Mharidzo & mutengo
Ndeapi marudzi echigadzirwa anogadzirwa naKingHow?
Tine runyoro rwakakwana rwezvigadzirwa zvatinogadzira, asi isu tiri kunyanya muhombodo. Bhegi, bhegi reDuffel, Bhegi remitambo, Bhegi reMidziyo, Bhegi inotonhorera etc. Isu tinotengesawo zvimwe zvinhu zvakabatana kune mutengi wedu senge Camping tent, Sleeping bag, Camping mat, Caps / Hats, Umbrella nezvimwe.
Ndeapi machira uye akapiswa anoita KingHow anoshanda nawo?
Polyester, Nylon, Canvas, Oxford, Ripstop mvura-kuramba nylon, PU dehwe ndiwo machira edu akajairika. Yakapiswa nekudhinda nekushongedza zviripo. KingHow ine ruzivo rwakawanda rwekutsvaga chero chero chinhu chinodiwa kusona chigadzirwa chako. Kana iwe uine chaiwo zvinhu zvinodiwa izvo isu tinogona kuzviwanira iwe.
Ndeipi yakajairwa nguva yekutungamira yemuenzaniso kana odha?
Kazhinji, sampling inoda mazuva 7-10. Iyo yakajairwa nguva yekutungamira yechinhu chakagadzirwa-chinogadzirwa ndeye mavhiki e4-6 zvichienderana nezvinodiwa zvekusona, huwandu, uye kuwanikwa kwezvigadzirwa. Muzviitiko zvekumhanyisa maodha, isu tinoshanda newe nepose patinogona napo kuzadzisa yako yenguva yezuva zvido.
Ko KingHow dhizaini kana kugadzira chigadzirwa chemutengi?
Chaizvoizvo, isu hatigadzire uye tinogadzira chigadzirwa chitsva chemutengi. Asi isu tichabatsira vatengi vedu kuti vaite iri basa, neruzivo rwedu isu tinogona kupa zano pane chigadzirwa uye tibatsire kutsvaga mhinduro kuti tiwane sarudzo yakanaka.
KingHow inopa sei masampuli?
Yemuenzaniso yemahara kazhinji, asi kana ikagadzira chinhu chakaomarara kana ichida kuvhurika muforoma, inofanirwa kuve nemutero wekubhadhara mutengo wekusimudzira pateni, setup setup uye kutenga kwezvinhu. Kana odha yaiswa, muyero wekuenzanisira unozobviswa kubva kuhuwandu hwehuwandu, uye pre-yekugadzira sampuli inogara ichipihwa kusaina isati yagadzirwa.
Iko kune hushoma huwandu hwekuhodha?
Kune yakaitwa-ku-odha kana yechinyakare yakadhindwa chinhu, iyo shoma odha huwandu i100 zvidimbu kana $ 500 Isu tinoedza kugadzirisa vatengi pese pazvinogoneka. Nekudaro, kana kugadzirwa kwedu kukasagadzirirwa kuti chigone chigadzirwa chako zvakanaka, isu tingangoda huwandu hukuru kuvhara mari yekumisikidza.
Ko KingHow inopa sei zvese zvigadzirwa zvisikwa zvinodiwa kugadzira chinhu?
KingHow inochinja-chinja nekutenga kwezvinhu zvakasvibirira zvechigadzirwa chako. Kuburikidza netiweki yedu yevatengesi, tinogona kuwana chero chero chinhu pamutengo unoshanda mitengo. Kune rimwe divi, kana mutengi achida kutipa zvinhu zvacho, tinofara kuzvitora. Kune yakasarudzika Hardware kana zvimwe zvakaoma-kuwana-zvinhu, isu tichashanda newe kuona yakanakisa kutenga nzira.
Ndeipi nguva yekubhadhara iyo KingHow inoda?
KingHow inokumbira mareferenzi echikwereti kubva kune vese vatengi vatsva uye vanoita cheki yechikwereti basa risati ratanga pane yavo yekutanga odha. Isu tinowanzokumbira kubhadharwa pasi kwe30-50% pane yako yekutanga odha. Pamberi pekutumirwa kweiyo odhiyo, KingHow inotumira tsamba invoice yekuyera. Zvekuhodha zvakare, tinogona kuita 30% dhipoziti uye 70% bhalanzi kurwisa kopi yeB / L.